Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 32
Azo atao ve ny mametraka ao an-tsaina ao an-tsaina? Raha eny, ahoana no atao; ahoana no ahafahan'ny iray manakana ny fiverenan'ny azy ary tsy hiala ao an-tsaina?
Azo atao ny miaro ny saina ao an-tsaina, saingy tsy azo atao ny mametraka ny fisainana tsy ao an-tsaina fa hoe hanisy fitoeram-baravarana ivelan'ny trano isika. Ny antony mahatonga ny be dia be tsy afaka misoroka ny eritreritra tsy mendrika ary tsy afaka mieritreritra hevitra mazava, dia satria mino izy ireo fa tsy maintsy mametraka eritreritra ao an-tsain'izy ireo. Tsy azo atao ny mametraka eritreritra ao an-tsain'ny olona iray, satria ny fisarihana azy dia tsy maintsy omena ny eritreritra, ary raha ny saina kosa manome ny saina dia tsy ho afaka miala amin'izany eritreritra izany. Dia ilay miteny hoe: Mandehana fa tsy noheverinao ho ratsy, na, tsy hieritreritra izany na tsia aho, dia tazonina ao an-tsaina ao an-tsaina ao an-tsaina izany zavatra izany toy ny hoe voaro teo. Raha misy milaza amin'ny tenany hoe tsy tokony hieritreritra an'izany na izany zavatra izany, izy dia ho toy ny ascetics sy ny hermits ary ny fanatics izay manao lisitr'ireo zavatra tsy tokony hoeritreretiny ary avy eo hanohy ny handanjalanja ity lisitra ity. ireo eritreritra ireo dia tsy ao an-tsainy ary tsy mahomby. Ilay tantara taloha an'ny "The Green Green Bear" dia mampiseho tsara izany. Nisy alchemist haino aman-jery iray novonoin'ny iray tamin'ireo mpianany te-hilaza momba ny fandefasana fironana ho volamena. Ny tompony dia nilaza tamin'ny mpianatra fa tsy afaka manao izany, na dia notenenina aza izy, satria tsy mahafeno fepetra. Mikasika ny fitohizan'ny mpianatra hatrany dia nanapa-kevitra ny hampianatra lesona ilay mpianatra ny alchemist ary nilaza taminy fa rehefa handeha amin'ny ampitson'iny izy dia hamela azy ny pormaly izay hahombiazany raha afaka manaraka ny toromarika rehetra. , fa ilaina ny mandinika tsara ny filana ary tokony ho marina amin'ny antsipiriany. Ilay mpianatra dia faly ary nazoto nanomboka ny asa tamin'ny fotoana voatondro. Narahiny tamim-pitandremana ny torolàlana ary marina tsara ny fanomanana ny fitaovana sy ny fitaovany. Hitany fa ny metaly manana ny kalitao tsara sy ny habetsahany dia ao anaty lakroa mety aminy, ary ny hafanana ilaina no novokarina. Nitandrina izy fa voaro tsara daholo ny zavamanana ary nandalo tao anaty alika sy vakivaky, ary nahita fa ny tahiry avy amin'ireto dia tena arakaraka ao amin'ny torolàlana. Izany rehetra izany dia nahatonga azy ho afa-po tanteraka ary rehefa nanohy ny fanandramana izy dia nahazo fahatokisana tamin'ny fahombiazany farany. Ny iray amin'ireo fitsipika dia ny tsy tokony hamakiana ny filaharana fa tokony hanaraka izany fotsiny izy rehefa nanohy ny asany. Rehefa nanohy izy dia tonga tamin'izao fanambarana izao: Ankehitriny dia nandeha hatrany ny fanandramana ary raha ny hafanana dia misy hafanana fotsy, makà sombin-jiro mena eo anelanelan'ny lohalika sy ny ankihavanana ankavanana, ampahany kely amin'ny vovoka fotsy eo anelanelan'ny lohateny sy ny ankiben-tànana havia, mijoroa amin'ny fifamirapiratra izay anananao ankehitriny eo anoloanao ary ho vonona ny hanipy ireo vovoka ireo rehefa avy narahinao ny baiko manaraka. Nanao ilay baiko sy novakiany ilay tovolahy: Efa nahatratra ny fitsapana zava-dehibe ianao izao, ary ny fahombiazana ihany no hanaraka raha toa ka afaka mankatò izao manaraka izao ianao: Aza mieritreritra ilay bera maitso be ary avereno fa tsy mieritreritra ny orsa maitso be. Niato kely ny tovolahy. “Ilay bera maitso. Tsy tokony hieritreritra ilay bera maitso aho, ”hoy izy. “Ilay bera maitso! Inona ny bera maitso? maraina, mieritreritra momba ilay bera maitso be ianao. ” Raha nanohy nieritreritra izy fa tsy tokony hieritreritra momba ny bera maintso izay tsy azony atao momba ny zavatra hafa, mandra-pahatongan'ny farany dia nitranga taminy fa hanohy ny fanandramana izy ary na dia eritreretina aza ny fisian'ny bera maitso mbola ao an-tsainy. nitodika tany amin'ilay formula mba hahitana hoe inona ny filaharana manaraka ary novakiany izy: Tsy nahomby ianao tamin'ny fitsapana. Tsy nahomby ianao tamin'io fotoana lehibe io satria navelanao hisintona tsy ho amin'ny asa ny sainao mba hieritreritra momba ny bera maitso. Ny hafanana ao anaty lafaoro dia tsy notazonina, ny habetsaky ny setroka dia tsy nahavita nandalo izany ary miverina, ary tsy ilaina intsony izao hanintsana ny loko mena sy fotsy.
Mijanona ao an-tsaina ny hevitra raha mbola omena azy ny saina. Rehefa ny saina tsy mitsahatra mifantoka amin'ny eritreritra iray ary mametraka azy amin'ny eritreritra hafa, dia mijanona ao an-tsaina ihany ny eritreritra izay misarika ny saina, ary izay tsy ahitana azy dia mivoaka. Ny fomba hialana eritreritra dia ny mitazona ilay saina azo antoka sy maharitra amin'ny lohahevitra iray na hevitra iray voafaritra. Ho hita fa raha vita izany dia tsy misy eritreritra izay tsy mifandray amin'io lohahevitra io. Na dia maniry zavatra iray aza ny saina, dia mihodina manodidina an'io zavatra faniriana io ny faniriana satria ny faniriana dia toa foiben'ny fahaterahana ary manintona ny saina. Ny saina dia afaka manafaka amin'izany faniriana izany, raha izany no sitrapo. Ny dingana izay amahana azy dia ny mahita sy mahatakatra fa ny faniriana tsy tsara indrindra ho azy ary avy eo dia manapa-kevitra amin'izay zavatra tsara kokoa. Aorian'ny fanapahan-kevitra manapa-kevitra momba ny foto-kevitra tsara indrindra dia tokony hitarika ny eritreritra momba an'io lohahevitra io ary ny saina dia tokony homena an'io lohahevitra io ihany. Amin'izany fomba izany, ny afovoan-gravity dia miova hatramin'ny faniriana taloha ka hatrany amin'ny foto-kevitra fisainana vaovao. Ny saina no manapa-kevitra hoe aiza ny toerana ivon'ny gravitation. Na inona na inona lohahevitra na zavatra apetraky ny sainy dia ho avy ny eritreritra. Koa ny saina dia manohy manova ny foto-kevitry ny eritreritra, ny ivon'izany gravité izany, mandra-pahaizana mametraka ny ivon'ny gravitation ao aminy. Rehefa vita izany, ny saina dia misintona ao aminy ny fahaizany sy ny fiasa ao aminy, amin'ny alàlan'ny fahalalàna sy ny taova. Ny saina, tsy mandeha amin'ny alàlan'ny fahatsapana ho ao amin'ny tontolo ara-batana, ary mianatra mianatra ny hamadika ny angovo ho azy manokana, dia taitra ihany ny zava-misy azy ihany, miavaka amin'ny nofony sy ny vatany. Amin'ny fanaovanao izany, ny saina dia tsy mahita ny tena maha izy azy fa mety hahita ny tena toetran'ny hafa rehetra sy ny tontolo tena izy izay mitaona sy manohana ny hafa rehetra.
Ny fahatsapana toy izany dia mety tsy ho tratrarina indray mandeha, fa ho tanteraka izany fa vokatra farany amin'ny fisakanana ny eritreritra tsy takatry ny saina amin'ny alàlan'ny fiatrehana sy ny fisainan'ny hafa izay tiana. Tsy misy olona afaka mieritreritra afa-tsy ny eritreritra tiany hoeritreretina ary tsy hanilika na hanakana ny hevitra hafa hiditra ao an-tsaina; nefa ho afaka hanao izany izy raha manandrana sy manandrana hatrany.